Semalt ကျွမ်းကျင်သူပုံမှန် link-building အမှားများကိုရှင်းလင်း
ထိုစဉ်က link များတည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာတိုင်းတွင်သင်လင့်ခ်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးရလဒ်အနေနှင့်သင့်မြင်သာမှုတိုးပွားလာသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် link တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးမတူကွဲပြားသော၊ ပို၍ ဆိုးသည်မှာ၎င်းသည်အတိတ်၏သရဲများကြောင့်ဒဏ္myာရီများနှင့်အယူအဆမှားများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်းစီးပွားရေး၌အပျော်တမ်းအများစုသည်တူညီသောအမှားများကိုပြုလုပ်ကြသည်။
Semalt ဒီဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဖောက်သည်အောင်မြင်သူမန်နေဂျာ Ross Barber က၎င်းတို့အားရှောင်ရှားရန်အတွက်လူသစ်မှားအမှားများကိုဖော်ပြသည်။
1. အရည်အသွေးထက်အရေအတွက် ဦး စားပေး
၎င်းသည်လူအများစုတို့၏အချိတ်အဆက်တည်ဆောက်ခြင်းကြိုးပမ်းမှုများတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အရှုံးပေးရန်သွေးဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် link သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရည်အသွေးနိမ့်လင့်များများစွာထက်ပိုကောင်းသည်။ သို့သော်အရည်အသွေးမြင့်လင့်ခ်များသည်ရယူရန်ခက်ခဲပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သောလင့်ခ်များသည်ရယူရန်လွယ်ကူသည်။ အနည်းဆုံးခုခံမှုလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည်။
သင်၏လင့်ခ်များ၏အရေအတွက်သည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောအချိတ်အဆက်များအတွက်မည်သည့်အခါမျှအစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်လင့်ခ်သည် SEO တိုးတက်မှုထက်များစွာပိုသည်။ သူတို့ကအစလွှဲပြောင်း link ကိုအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဆက်ကပ်။
2. အလွန်အကျွံ - ပိုကောင်းအောင်ကျောက်ဆူးစာသား
ဤအယူအဆသည်ထိရောက်သောချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုအတွက်အရေးပါခဲ့သည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီကနေ့သင့်ရဲ့အတွင်းကချိတ်ဆက်ထားသောလင့်ခ်များ၏ကျောက်ဆူးစာသားဟာအသုံးချခြင်းသို့မဟုတ်သဘာဝမဟုတ်သောပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သင့်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြစ်ဒဏ်များသည်အတော်လေးပြင်းထန်ပြီးသင်တစ် ဦး ထံမှပြန်လည်မရရှိနိုင်ပါ။ အဲဒီအစား၊ သင်၏ကျောက်ဆူးစာသားသည်ယုတ္တိရှိပြီးအသုံးဝင်ကြောင်းသေချာစေပါ။
အမှန်ကတော့၊ သင်၏လင့်ခ်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပါဝင်သည့်အရာများထဲတွင်ဖွဲ့စည်းထားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လျှင်မြန်စွာ (သို့) သင်၏ link ကိုအကြောင်းအရာထက်ကျော်လွန်ပါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏ link အားသံသယရှိသူအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည်လည်းထုတ်ဝေသူများ၏ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။ သင်၏စာကိုမထုတ်ယူခင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသင့်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုတွင်အောင်မြင်ရန်သင်၏နည်းဗျူဟာသည်တတ်နိုင်သမျှအမျိုးမျိုးကွဲပြားရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မတူညီသောရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှီခိုပြီးသင်၏ဖြန့်ဝေမှုပုံစံကိုလှည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သံစုံတီးဝိုင်းကျပန်းကျဆင်းခြင်း၏အတိုင်းအတာကိုရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ link building ခရူးဆိတ်စစ်ဆင်ရေးမှအမှန်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မြင်လိုလျှင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
ဒီ link link building campaign စတင်သည်နှင့်အပျော်တမ်းသမားများအမှားလုပ်မိသည်။ သငျသညျတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လိုလျှင်သင်အထက်သို့စကေးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောရင်းမြစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အခွန်ကောက်ခံနိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံးသင်လုပ်ချင်သောအရာသည်ရပ်တန့်သွားစေသည်။
ဤအမှားများသည်အပြစ်ကင်းခြင်းမှပြင်းထန်ခြင်း၏ပြင်းထန်မှုအရအထိရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်မည်မျှပင်ကောင်းမွန်ပါစေအမှားများပြုလုပ်မိလိမ့်မည်။ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့လျှော့ချမည်ဆိုသည်မှာသင်ရှေ့သို့ရွေ့မည်မရွေ့ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။